Dagaal Dublamaasiyadeed Oo Mar kale Ka Dhexqarxay SNM iyo Faqash (WQ: Cali Cabdi Coomay) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Dagaal Dublamaasiyadeed Oo Mar kale Ka Dhexqarxay SNM iyo Faqash (WQ: Cali Cabdi Coomay)
Waxa hore loo yidhi Taariikhdu iyada ayaa dib isu soo celisa, taasi maanta si cad ayey u muuqataa. Haddii ay SNM ka adkaaty Faqash-ta muddo haatan laga joogo 31 sanno (1988-2019), waxa mar kale bilaabmay dagaal Siyaasadeed oo weji cusub leh oo ay soo qaaday dhashii Faqash-tu. Haddii uu dagaal xabbad ahi muddo sagaal sannadood ah uu dhexmarayey taliskii dhiigyo cabka ahaa ee Afweyne iyo xoogagii xaq-u-dirirka ahaa ee SNM, maanta isla dagaalkaasi oo weji dublamaasiyadeed leh ayaa ka dhexqarxay SNM uu madaxweyne Muuse Biixi ka wakiil yahay iyo taliskii Afweyne oo uu Farmaajo ka wakiil yahay. Dagaalkan dublamaasiyada ee ay soo qaaday dawladda Farmaajo wuxuu ka duulayaa halku dhig ah Waxaad burburiseen dawladdii adeerkay. Waxa se ay maanta dhaadan yihiin in Soomaalilaan ay wada ilaashanayaan beelihii wada degayey. Waxa aynu qormadan guud mar ku sameyn doonaa inta dagaal ee ay taariikhaha qorni diiwaangeliyeen ee ay xoogagii SNM adhaxda kaga jebiyeen taliskii Maxamed Siyaad. Waxa se la tabayaa kaalintii USC ay dagaalka dublamaasiyadeed kaga jirto.
= Hawgalkii miiska Saraakiisha April 1983: dagaalyahanno ka tirsan SNM ayaa si la yaab leh hawgal uga fuliyey xaruntii miiska saraakiisha ee Hargaysa. Waxa aanay hawgalkaasi kula baxeen Kornayl C/laahi Askar AHN oo maxbuus ahaan ay goobtasi ugu xidheen ciidankii MSBarre.
= Dalbashadii Dhoofinta Xoolaha: Dhawaan ayuu wasiirka xannaanada xoolaha Soomaaliya shir jaraaid ku sheegay in boqortooyada Sucuudigu ay dhoofinta xoolaha iyaga ogolaansho u siisay in la soo marayo oo ogolaansho laga soo qaato.
= Kulankii safiirada Soomaaliya adduunka u joogay: Waxa la yidhi Meyd waxa u dambeeyey kaa la sii sido. Dagaallada dublamaasiyadeed waxa ugu dambeeyey kulan ay si wad jir ah ula yeeshee safiirada Soomaaliya adduunka u kala fadhiya Farmaajo iyo wasiirkii arrimaha dibada Cawad. Waxa ay fareen safiirada oo u badan beesha Farmaajo inay ka dagaalamaan ololaha xoogan ee Soomaalilaan u qaaday inay caalamka kaga raadsato ictiraaf. Safiir kastaana uu shaqadiisa ka soo dhalaalo.
Dhammaan toddobo dagaal siyaasadeed lama hayo mid guulaystay, intooda badan madaxda Soomaalilaan way ka daba-tageen oo qaarkood way fashiliyeen, kuwa kalena way ku dhex jiraan. Waxa se ay suaashu fadhidaa ma u suurtageli doontaa in dagaalka dublamaasiyadeed ee bilaabmay Soomaalilaan laga gacan sarreyn doono, mise sidii Fashaq-ta lagu yaqaanay ayaa afka ciida loo dari doonaa?